Bizzabo: ampiasanao amin'ny sehatra tokana ny hetsika manokana ataonao manokana sy virtoaly | Martech Zone
Zoma, Oktobra 2, 2020 Zoma, Oktobra 2, 2020 Douglas Karr
Bizzabo dia sehatry ny fahombiazan'ny hetsika izay manome ny ekipanao fitaovana rehetra ilain'izy ireo hamoronana hetsika manome valisoa eo am-pivoahana ny fahitana mba hanampiana ny hetsika hitombo amin'ny fomba tsy noeritreretinao hoe mety mihitsy.
Endri-javatra Bizzabo Event Platform
Bizzabo's all-in-one rindrambaiko hetsika mamela ny hetsika manokana sy virtoaly handefa traikefa tsy manam-paharoa amin'ny mpanatrika amin'ny alàlan'ny fifandraisan'ny tena manokana sy manan-tsaina.
Fisoratana anarana amin'ny hetsika - amboary tanteraka ny mpitsidika anao hanana traikefa amin'ny mpanatrika amin'ny endrika manankarena sy manaitra, karazana tapakila marobe.
Event Website - manangana tranokala hetsika misy marika miaraka amina tonian-dahatsoratra mahery vaika izay mifangaro tanteraka amin'ny lozisialy fisoratana anarana hetsika sy fampiharana fampiharana.
Miresaha - Mandefasa fanasana mailaka sy fanentanana hampiroborobo ny fahalianana sy ny fisoratana anarana amin'ny alàlan'ny atiny manokana.
Engage - manery ny fampandrenesana, ny tambajotran'olon-droa, ny fandaharam-pifaneraserana mivantana ary ny fandatsaham-bato mivantana hiara-miasa mba hahatonga ny mpanatrika anao hirotsaka — na ao anaty na ivelan'ny fampiharana hetsika finday.
Monetize - Omeo fotoana tsy manam-paharoa ireo mpanohana anao, ao anatin'izany ny efijery splash manokana, tolotra manokana, hiantsoantso fampandrenesana mandeha ho azy, ambaratonga mpanohana, ary ny angona handrefesana tsara ny ROI mpanohana.
Report - Ny fanaovana tatitra lalina dia manamora ny fahafantaran'ny ekipanao ny fomba fanaovana hetsika raha oharina amin'ny refy. Mametraha tanjona, araho ny fidiram-bola sy ny firotsahana, sns.
Bizzabo dia manampy ny orinasa handrefy, hitantana ary handanjalanja ny hetsika hivoahana amin'ny vokatra lehibe - hanomezana hery ny mpikarakara, mpivarotra, fampirantiana ary mpanatrika rehetra hamoaka ny herin'ny hetsika matihanina.
Hetsika Virtual Bizzabo
Bizzabo dia manampy ny orinasa hahatratra ny fahafaha-manao feno fandraisan'anjaran'ny mpijery amin'ny zavatra niainany izay (efa ho) misy fiantraikany toy ny hetsika manokana, na aiza na aiza misy ny mpanatrika anao. Miaraka amin'ny vahaolana farany navoakany, azonao atao ny mandefa fampielezam-peo avo lenta sy horonan-tsary ilaina amin'ny alàlan'ny vahaolana navoakan'ny orinasa. Anisan'izany ny:
Live mivantana ny hetsika manontolo na fivoriana manokana ho an'ny mpijery manerantany amin'ny habe rehetra miaraka amina sehatra video mitarika, ampandehanin'i Kaltura.
Namboarina tamin'ny ambaratonga avo indrindra amin'ny fari-piarovana sy tsiambaratelo mba hiantohana ny fiarovana ny angon-drakitrao ary hanaraka ny lalàna mifehy.
Ampitomboy ny fidiram-bolan'ny mpanohana amin'ny alàlan'ny doka anaty horonantsary ka hatramin'ny fametrahana mpanohana mandritra ny hetsikao.
Hanitatra ny vahaolana virtoaly Bizzabo ary mifandray amin'ireo haitao video tianao.
Bizzabo koa dia manolotra serivisy famokarana virtoaly
Ny ekipan'i Bizzabo Virtual Production Services dia manome serivisy virtoaly sy hybrid end-to-end, ao anatin'izany ny famokarana, feo ary sary, famolavolana, fampiharana ary maro hafa.
Manomboka amin'ny fanomanana mpandahateny sy mpanelanelana amin'ny alàlan'ny fampielezam-peo avo lenta, Bizzabo dia manolotra serivisy isan-karazany mifanaraka amin'ny filàn'ny hetsika.
Manome hetsika ho an'ny marika toa an'i Forbes ny Bizzabo, HubspotINBOUND, Dow Jones, Gainsight, ary maro hafa. Ny orinasa dia natsangan'i Boaz Katz, Alon Alroy, ary Eran Ben-Shushan, ary manana mpiasa mihoatra ny 100 ao amin'ny biraon'ny New York sy Tel-Aviv.
Tags: bizzabofampiharana amin'ny fihaonambefihaonambe fivarotanafifaneraserana
Kameleoon: Masinina AI handinihana ny mety hisian'ny fiovan'ny mpitsidika